1 Bere a atemmufo+ bu atɛn no, ɔkɔm+ baa asase no so. Na ɔbarima bi ne ne yere ne wɔn mmabarima baanu tu fii Betlehem+ a ɛwɔ Yuda kɔyɛɛ ahɔho wɔ Moab+ asase so. 2 Ɔbarima no din de Elimelek, na ne yere nso din de Naomi, na ne mma baanu no din de Malon ne Kilion. Ná wɔyɛ Efratafo+ a wofi Betlehem a ɛwɔ Yuda. Bere a wokoduu Moab asase so no, wɔtenaa hɔ. 3 Bere bi akyi no, Naomi kunu Elimelek wui, na ɛkaa ɔne ne mma baanu no. 4 Akyiri yi, ne mma no waree Moabfo mmea.+ Obiako din de Orpa, na obiako nso de Rut,+ na wɔtenaa hɔ bɛyɛ mfe du. 5 Wɔn baanu no, Malon ne Kilion nso wuwui, enti ɔbea no kunu ne ne mma baanu no nyinaa wuwu gyaw no. 6 Bere a ɔwɔ Moab asase so no, ɔtee sɛ Yehowa asan abɛhwɛ ne nkurɔfo+ ama wɔn aduan,+ enti ɔyɛe sɛ ɔne ne sewnom betu afi Moab asan akɔ. 7 Otu fii baabi a ɔkɔtenae no,+ na ɔne ne sewnom baanu no sii kwan so sɛ wɔresan akɔ Yuda asase so. 8 Ɛnna Naomi ka kyerɛɛ ne sewnom baanu no sɛ: “Monsan, obiara nkɔ ne maame fie. Yehowa ne mo nni no adɔe so,+ sɛnea mo ne mmarima a wɔawu no ne me adi no adɔe so no.+ 9 Yehowa nhyira+ mo, na ɔmma munnya homebea+ wɔ mo kununom fie.” Afei ofifew wɔn ano,+ na wɔmomaa wɔn nne so sui. 10 Ɛnna wɔka kyerɛɛ no sɛ: “Dabi, yɛne wo nyinaa bɛkɔ wo nkurɔfo nkyɛn.”+ 11 Na Naomi kae sɛ: “Me mma, monsan. Dɛn nti na mopɛ sɛ mo ne me kɔ? Metumi asan awo mma ama moaware wɔn anaa?+ 12 Me mma, monsan, manyin dodo sɛ mɛware bio. Na sɛ meka sɛ metumi anya kunu anadwo yi awo mma mpo a,+ 13 mubetumi atwɛn ama wɔanyinyin? Mubetumi atwɛn wɔn a morenware? Me mma, ɛrenyɛ yiye; mo asɛm yɛ me awerɛhow paa efisɛ Yehowa ne me anni no yiye.”+ 14 Ɔkaa saa no, wɔmomaa wɔn nne so sui bio, na Orpa few n’ase ano ne no dii nkra. Rut de, wansan.+ 15 Enti ɔka kyerɛɛ no sɛ: “Wo kora okunafo no asan kɔ ne nkurɔfo ne n’anyame nkyɛn.+ San na wo ne wo kora nkɔ.”+ 16 Rut ka kyerɛɛ no sɛ: “Nhyɛ me sɛ mensan mfi w’akyi; na baabi a wobɛkɔ no, ɛhɔ na mɛkɔ, baabi a wobɛda no, ɛhɔ na mɛda.+ Wo man bɛyɛ me man,+ na wo Nyankopɔn ayɛ me Nyankopɔn.+ 17 Nea wubewu no, ɛhɔ ara na mewu,+ na ɛhɔ ara nso na wobesie me. Gye owu na ɛbɛtetew me ne wo ntam, anyɛ saa a Yehowa ntua me ka na ɔnsan mfa bi nka ho.”+ 18 Bere a ohui sɛ wawe ahinam so sɛ ɔne no bɛkɔ no,+ wanhyɛ no bio. 19 Enti wɔn baanu no toaa so koduu Betlehem.+ Na bere a woduu Betlehem no, kurom hɔfo nyinaa bɔɔ twi bɛhwɛɛ wɔn,+ na mmea no kae sɛ: “Naomi ni?”+ 20 Na ɔka kyerɛɛ mmea no sɛ: “Mommfrɛ me Naomi. Momfrɛ me Mara, efisɛ ade nyinaa so Tumfoɔ+ no ne me adi no nwenweenwene paa.+ 21 Mekɔɔ no mã,+ nanso Yehowa ama maba no nsapan.+ Dɛn nti na mofrɛ me Naomi, bere a Yehowa abrɛ me ase,+ na ade nyinaa so Tumfoɔ no ama awie me bɔne yi?”+ 22 Saa na ɛyɛe a Naomi ne n’ase Moabni Rut san fii Moab+ asase so bae. Woduu Betlehem+ no na wɔafi atokotwa ase.+